Akụkọ - Akpa dị n'ahịa nkwakọ ngwaahịa na-ewu ewu, dị mma yana uru dị mma
Nri ndị mmadụ bụ ụbọchị, nri na nchekwa na mbụ. N'ime ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa na-aga n'ihu n'oge a, ndị mmadụ na-enwewanye nchegbu banyere nchekwa na ịdị mma nke nkwakọ ngwaahịa. Yabụ kedu ihe ga-emetụta nchekwa nke nkwakọ nri? Ihe nkwakọ ngwaahịa bụ ihe kpatara ya, nsogbu usoro nkwakọ ngwaahịa sochiri ya. Ya mere na nsụhọ ahụike nke taa na-arị elu, ụzọ ahụike dị mma ma dị irè dị oke mkpa, nke na-akwalite mmepe nke usoro nkwakọba akpa n'ime igbe.
Akpa-n'ime igbe, dị ka aha ahụ pụtara, mejupụtara akpa dị nro nke ihe dị iche iche nke nwere ihe na-enye mmiri mmiri yana n'èzí bụ igbe nke corrugated. Akpa dị n'ime igbe ahụ bụ ihe nkiri mejupụtara, na-eji ihe dị iche iche eme ihe iji gboo mkpa nke nkwakọ ngwaahịa mmiri dị iche iche, nwere ike inye 2-10 lita nke akpa foil aluminum, akpa transperent, otu ma ọ bụ na-aga n'ihu na-apụta nke ngwaahịa ọkọlọtọ, na ọkọlọtọ nwere ike. ọnụ, nwere ike ịgbasa akara koodu, nwekwara ike ịhazi ya.
E jiri ya tụnyere ụdị nkwakọ ngwaahịa ọdịnala, nkwakọba akpa-in-igbe nwere uru asọmpi doro anya, dị ka ndụ ogologo ndụ, ọkụ ka mma na ihe mgbochi oxygen, na-eji obere ihe na imegharị ya, nwere ike ijikwa ụdị ngwaahịa dị iche iche n'otu ngwa ndochi. , nwere ike dabara maka aseptik, nke na-adịghị mma, oyi, ndochi ọkụ, ọtụtụ nhazi, site na ọkara-akpaghị aka na-ejuputa ngwa ngwa zuru oke maka nhọrọ mgbanwe. Ọganihu nchekwa na njem njem, mbelata ego nchekwa na njem ụgbọ njem, ọnụ ahịa nkwakọ ngwaahịa dị ala, wdg. Ugbu a,nkwakọba akpa-n'ime igbe a na-ejikarị ụdị eme ihe na ihe ọṅụṅụ, mmiri ịnweta mmiri, mmanya, ihe ọṅụṅụ ihe ọṅụṅụ, mmanụ oriri, ihe mgbakwunye nri, wdg.
Dị ka nchọpụta ahịa si kwuo na-egosi na akpa-n'ime igbe nwere uru gburugburu ebe obibi doro anya. Dị ka ụdị nkwakọ ngwaahịa nwere obere carbon na gburugburu ebe obibi, akpa-na-igbe na-ebelata nke ukwuu iji ihe nkwakọ ngwaahịa na oriri ume, na-ebelata mmetụta ọjọọ nke nkwakọ ngwaahịa na gburugburu ebe obibi. Akpa-in-igbe na-eji obere nkwakọ ngwaahịa, nanị otu ụzọ n'ụzọ ise nke akpa siri ike, eji akpa-in-igbe nkwakọ dị nnọọ mfe ikewa na-emegharị, kpamkpam megharịa. Enwere ike mpịakọta akpa na igbe ma chekwaa ya tupu ejiri ya, na-ebelata ọnụ ahịa nchekwa na mbugharị nke ukwuu, na-ebelata oriri ike. Ọtụtụ n'ime akpa-in-igbe bụ otu-eji, na-ezere mmetụta nke kemịkalụ disinfection na ihicha na gburugburu ebe obibi na mmebi, ruo 1400 lita nke nkwakọ, nke pụtara obere nkwakọ ụgwọ kwa unit olu nke ngwaahịa, ogologo ngwaahịa shelf ndụ nakwa. na-ebelata ihe mkpofu nke ngwaahịa mebiri emebi.
N'ozuzu, ụlọ ọrụ ihe ọṅụṅụ na-eji akpa-na-igbe dabere na ịdị ọcha ya, ndụ ogologo ndụ, enweghị mmerụ ahụ na gburugburu ebe obibi. Na ndị mmadụ na-achọpụtawanye uru dị n'iji igbe igbe: ogologo ndụ, ịdị mma, enyi gburugburu ebe obibi, mma maka aseptic na okpomọkụ dị elu, nkà na ụzụ na-ejuputa dị ọcha, wdg.
A na-eji ngwugwu akpa n'ime igbe eme ihe n'ọtụtụ ebe n'akụkụ dị iche iche nke nri, ihe ọṅụṅụ na ụlọ ọrụ, na-aghọ otu n'ime ụdị nkwakọ ngwaahịa na-eto ngwa ngwa n'ahịa.
Ngwunye akpa n'ime igbe dị mfe iji chekwaa ma jikwaa ngwaahịa, ihe dị n'ime na n'èzí bụ ihe ndị na-eme ka gburugburu ebe obibi na-eme ihe, na-eji obere ihe iji belata oriri nke ngwaahịa mmanụ ala. E jiri ya tụnyere nkwakọ ngwaahịa siri ike nke ọdịnala, ọ na-echekwa ihe dịka 35% nke ụgwọ njem na nchekwa, na-emepụta 85% ihe mkpofu karịa karama, ma na-emepụta 55% obere carbon dioxide n'oge njem karịa karama n'ihi ịdị arọ ya. Ọnụ ego nke nkwakọ ngwaahịa dị ala karịa ụdị nkwakọ ngwaahịa ndị ọzọ (dịka karama PET, karama iko, drum plastik, wdg).
N'ahịa ihe ọṅụṅụ dị nro nwere ihe ọṅụṅụ, mmiri ọṅụṅụ, kọfị, tii dị njikere ịṅụ mmanya na ihe ọṅụṅụ na-arụ ọrụ, akpa-na-igbe nkwakọ ngwaahịa dị mfe ịnọgide na-adị ọhụrụ, dị mma na ịdị ọcha, yana ọnụ ahịa nkwakọ ngwaahịa dị ọnụ ala, a na-eji ihe nkwakọba akpa n'ime igbe eme ihe na ọwa nri na ihe ọṅụṅụ na njedebe ahịa ahịa. Ndị na-emepụta ihe na ngwaahịa dị iche iche, ọnụ ahịa asọmpi n'ọtụtụ ụdị na-apụta na asọmpi ahụ.
Karama PET bụ nrụgide doro anya na gburugburu ebe obibi, na isi iyi mmiri ọdịnala na-ebute nsogbu mmetọ nke abụọ na-emetụtakwa ahụike nke ndị na-azụ ahịa, n'agbanyeghị na enwere ọtụtụ isi iyi mmiri n'ahịa iji dochie ngwaahịa - akpa akpa, mana ha nọkwa ebe ahụ. bụ nsogbu dị iche iche dị ka ntapu ntapu, isi mmiri ugboro ugboro, mmetọ nke abụọ, ihe adịghị mma na ihe ndị ọzọ. Ojiji nke akpa n'ime igbe dị ukwuu iji zere nhụpụta nke nsogbu ndị a, ya mere site na nlebara anya nke ndị na-eji ahụike nke mmiri ọṅụṅụ kpọrọ ihe.
Maka ọtụtụ ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa China, ọkachasị ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa na-agbanwe agbanwe, abụrụlarị ọkwa obere uru, ekwenyere m na nkwakọba akpa-n'ime igbe ga-aghọ ngwaahịa kpakpando ọhụrụ na ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa, na-emepụta uru maka ụlọ ọrụ na ịmepụta uru maka ndị ahịa.